यस्तै रहे हाम्रो देश रहला कि नरहला ?
२०७८ जेष्ठ २३, आईतवार १४:५९
रास्ट्रपतिले नेपालको संविधान लत्याएर संसद विघटन गर्ने,
प्रधानमन्त्रीले संविधानको खिल्ली उदाउने – हाहा र हिहि गर्ने ,
संविधान जलाउने त्यो जसपा- तेइ सरकार चलाउने,
अध्यादेश लयाएर नगरिकता बनाउने तर सबै भरतिय नागरिकको मात्रै, साचीनै पाउनु पर्ने त्यो दलितले नपाउने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । बैकल्पिक सरकारको संभावना हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको सत्ता लोभका कारन उनले संसद विघटन गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सरकारको सो निर्णय उल्टाइदिएको थियो ।
जेष्ठ ८ गते फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गर्दै चुनाव घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले शुक्रबार जेष्ठ ८ गते दिउँसो आफै पत्रकार सम्मेलन गरेरे, अब मलाई दिक्क लागि सक्यो अब म सरकार चलाउन सक्दिन, म सङ बहुमत छैन भनेर घँषणा गरे तर सोही दिन फेरि जालझेल गरेर र सत्ता मोहले गर्दा राती १ बजे फेरि संसद विघटन गरे । विपक्षीले बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको लागि स्पष्ट बहुमत देखाउदा पनि सम्मानित रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ज्यालादारीले उहाँहरुले फेरि संसद विघटन गरे ।
विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेर महामारीका बीच पनि चुनावमा जाने स्पष्ट संकेत दिइसकेका थिए । मुलुकमा कोरोनाको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । अक्सिजन र खोपको हाहाकार छ । यस्तो महामारीका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरी देशलाई मध्यावधि चुनावतर्फ धकेलेका छन् ।
केही दिन अघि सम्म तेहि केपि ओलिको बिरोध गर्ने राजेन्द्र महतो अहिले तेहि सरकारको उप- प्रधानमन्त्री बनेका छन । के संविधान जलाउनु र उसलाई तेहि संविधान बमोजिमको सरकारमा राख्नु उचित हो र ? प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तेहि जसपाका नेताहरु थिए जस्ले प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिलाई ना ना थरी गाली गरेका थिए, राष्ट्रिय सामाचारहरुमा हामी स्पष्ट देखन सक्छम । जसपाका तेहि महन्थ थाकुर र राजेन्द्र महतो खेमा थिए जसले प्रधानमन्त्री केपि ओलि र रास्ट्रपति प्रतिगामी हो, उहाँ हरुले राजिनामा दिनु पर्छ भन्थे, तर आज जसपाले ८ वटा मन्त्रालय पाएपछि केपि ओलि नै माहान भनेर आफ्नो पार्टी फुटाउन पनि समय लगाएन्न ।
प्रधानमन्त्री केपि ओलिले मधेसका मुद्दा र समस्या समाधान गरे तेहि भएर हामी ओलिको समर्थनमा छम र सरकारमा गयौम भन्छन् जसपाका ठाकुर-महतो खेमाका नेताहरु । मधेसको मुद्दा सम्बोधन भएकै हो त ? १०० – २०० कैदि छुटाउनु र रेश्म चौधरीको रेहाई के त्यो मात्र मधेशका मुद्दा हो ? के तेस्कै लागि हजरौ जन्ता मधेस आन्दोलनमा हत्या गरे ती मधेसवादि दलले ? त्यो बेला केपि ओलि मधेस बिरोधि हो भन्ने र हजारौं मधेसी जन्तालाई सडकमा ल्याइ गोलि खुवाउने तेहि महन्थ ठाकुर र रजेन्द्र महतो हैन ? चुनावको बेला केपि ओलि मुर्दावाद भनेर चुनाव जित्न खोज्ने अनि पछी उही संग सरकार बनाउने ? जनतालाई कमाइ खाने भादो मात्र बनाएर रख्या छन ती मधेसबादि नेता हरुले, जनताले यो कुरा कैले बुझ्ने ।
सम्मानित रास्ट्रपतिले संविधान माथी तेकेर संसद विघटन गर्नु हुनछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी बचाउन देशको हित विरुद्ध काम गर्नु हुन्छ । देशका दलित र पिछदिएका वर्गहरुले आइले सम्म नागरिकता पएका छैनन् तर नागरिकता अध्यादेश ल्याएर भारतीय मुलुकका नगरीकनलाई भएभरकालाई नागरिकता दिएर भित्राउने । एस्तै रहे के केही वर्ष पछी यो देश रहला र ? एक नेपाली नागरिकको उस्को सम्मानित रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सङ एक प्रश्न – आदित्य महतो